WAA MAXAY ASP.NET ACCOUNT ACCOUNT? SIDEE LOO TIRTIRAA? - JILICSAN
Windows 10 Cusbooneysii
Waa maxay ASP.NET Account Account? Sidee loo tirtiraa?
La dhajiyayMarkii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Juun 6, 2021
Akoonada isticmaalayaasha maxalliga ah ee Windows ayaa sifo wanaagsan u ah marka dad badan ay isticmaalaan PC isku mid ah oo ay rabaan inay ilaashadaan sirkooda. Si kastaba ha ahaatee, dhacdo la yaab leh ayaa u muuqata inay ku dhacayso isticmaaleyaal badan, maadaama akoon cusub oo la yiraahdo ASP.NET Machine uu ka soo muuqdo kombuyutarkooda. Haddii aad la kulantay dhibaatadan oo aad ka werwersantahay in xubin qoyska ka mid ah uu ciyaaray dhoola-tus nacasnimo ah, dabadeed is hubso. Hagahan ayaa kaa caawin doona inaad fahanto waa maxay xisaabta ASP.NET Machine Machine iyo sida aad ula macaamili karto akoonkan cusub ee kombayutarkaga
Nuxurka[ qari ]
Waa maxay ASP.NET Account Account?
Ma tirtiri karaa ASP.NET Account Machine?
Habka 1: Dib u rakib .NET Framework
Habka 2: Gacanta Ka saar Koontada Isticmaalaha
In kasta oo ay tahay wax dabiici ah in loo qaato in arrintan uu sababay fayras, koontada cusub ee degaanka waxaa dhab ahaantii soo saartay software Microsoft ah oo loo yaqaan .NET Framework. Habkan si toos ah ayaa loogu rakibay inta badan aaladaha Windows waxayna fududaysaa wada shaqaynta luqadda. Tani waxay ka dhigaysaa Qaab-dhismeedka .NET lagama maarmaan u ah shaqeynta ciyaaraha kala duwan iyo codsiyada koodkooda u baahan in la barto Windows.
Koontada mishiinka ASP.NET si toos ah ayaa loo abuuraa marka .NET Framework lagu rakibo qalabka Windows. Fursadaha akoonkan samaynta keligeed waa hooseeyaan oo badanaa waa khalad inta lagu jiro habka rakibaadda taasoo horseedaysa abuurista xisaabta ASP.NET Machine.
Koontada Mashiinka ASP.NET waxay helaysaa mudnaanta maamulaha marka la abuurayo waxayna mararka qaarkood waydiisaa isticmaalayaasha furaha sirta ah markaad gelayso. Inta aad sii wadan karto isticmaalka akoonkaaga aasaasiga ah, koontada NET waxay khatar ku tahay amniga PC-gaaga. Waxay awood u leedahay inay gacanta ku dhigto akoonkaaga oo ay kaa xidho kombayutarkaaga. Nasiib wanaag, waxaa suurtagal ah in la tirtiro xisaabta mashiinka ASP.NET gacanta oo laga ilaaliyo PC-gaaga in lala wareego.
Sidii hore loo soo sheegay, xisaabtan aan la rabin waxaa sababa khaladaadka habka rakibaadda software-ka. Dib-u-soo-celinta Qaab-dhismeedka waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee looga takhalusi karo arrinta. Qaab dhismeedka NET waa mid ka mid ah codsiyada caanka ah uguna fudud ee la heli karo ee ay abuurtay Microsoft. Waad awoodaa soo deji faylasha rakibaadda ka Bogga internetka ee dhibcaha Microsoft oo raac nidaamka rakibida guud ee kombayutarkaga. Dib u bilow kombuyutarkaaga ka dib markii la rakibo qaladka jirana la xaliyo.
Akoonada isticmaalayaasha maxalliga ah ee Windows si fudud ayaa looga saari karaa marka lagu daro. Haddii akoonku uu sii jiro ka dib habka dib-u-dajinta, waxaad ka saari kartaa iyada oo loo marayo guddiga xakamaynta, adigoon bedelin ama isticmaalin wax sirta ah.
1. Kumbuyuutarkaaga Windows, fur Control Panel.
2. Laga soo bilaabo doorashooyinka soo muuqda. Guji 'Akoonka Isticmaalaha' in la sii wado.
3. Guji 'Ka saar Xisaabaadka Isticmaalaha. ’
4. Halkan, dooro mishiinka ASP.NET xisaabta oo ka saar PC gaaga.
Sida loo rakibo Microsoft .NET Framework 3.5
Hagaaji mashiinka Virtual Java ama JVM qalad lama helin
Hagaajin Windows way dhammayn kari wayday isbeddellada la codsaday
Sida loo arko Uptime System gudaha Windows 10
In kasta oo Microsoft ay tahay mid ka mid ah aaladaha hawlgalka ee lagu kalsoonaan karo ee suuqa, khaladaadka noocaan ah ayaa wali u muuqda isticmaaleyaal badan. Si kastaba ha ahaatee, tillaabooyinka aan kor ku soo xusnay, waa in aad awood u yeelatid inaad wax ka qabato qaladka qaab-dhismeedka dhibcahan oo aad ka ilaaliso kombuyutarkaaga xisaabaadka isticmaalaha.
Waxaan rajeyneynaa in hagahan uu waxtar lahaa oo aad awooday inaad fahanto waa maxay xisaabta ASP.Net Machine iyo sida aad u tirtiri karto. Haddii aad hayso wax su'aalo ah, ku qor qaybta faallooyinka ee hoose annaguna waan kula soo xiriiri doonnaa.
Advait waa qoraa tignoolajiyada madax banaan oo ku takhasusay casharrada. Waxa uu leeyahay waayo-aragnimo shan sano ah oo ku qorida sida loo sameeyo, dib u eegista, iyo casharrada internetka.
Xalka U Hel Dhammaan Dhibaatooyinka Oo Ku Saabsan Windows 10
Copyright ©2022 | cyberschool.ac | Qaanuunka Arrimaha Khaaska Ah